I-Interpol Isebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana | Izindima ze-Interpol nezaziso ze-Interpol
I-Interpol Isebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana
Imithombo yezokuxhumana isibe yinto esemqoka ezimpilweni zethu. Iningi labantu emhlabeni lisebenza okungenani inkundla yezokuxhumana eyodwa. Eqinisweni, ucwaningo lwamuva luveze ukuthi cishe Abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ze-3.6 emhlabeni wonke sebenzisa imithombo yezokuxhumana. Ngenxa yalokho, inani elikhulu labasebenzisi liholele ekutheni izinhlangano eziningi zamukele izinkundla zokuxhumana ukuze zenze eminye yemisebenzi yazo. Phakathi kwalezi zinhlangano kubalwa i-International Criminal Police Organisation (INTERPOL).
Ngaphambi kokuthi singene ekutheni i-INTERPOL, inhlangano yamaphoyisa enkulu kunazo zonke emhlabeni, isebenzisa kanjani izinkundla zokuxhumana, ake siqale sithole ukuthi ngabe i-INTERPOL imayelana nani.
The Inhlangano Yamazwe Ngamazwe Yezobugebengu (INTERPOL) yinhlangano engaphansi kohulumeni equkethe amazwe angama-194 angamalungu. Inekomkhulu lalo eliseLyon, eSingapore. Le nhlangano ngokuyinhloko isebenza nombutho wamaphoyisa wamazwe angamalungu ayo ukunqanda izenzo zobugebengu ezingeni lomhlaba jikelele.
Bayakwazi ukufeza lokhu ngokunika amandla amandla wamaphoyisa amazwe angamalungu ukuthi abelane futhi afinyelele idatha kumacala nobugebengu. I-INTERPOL idale uhlelo lapho iminyango yamaphoyisa emazweni angamalungu ingabelana ngolwazi olunjalo.
Ezweni ngalinye lamalungu, i-INTERPOL ineNational Central Bureau (NCB). Leli Bureau lisebenza njengendawo yokuxhumana ye-General Secretariat yenhlangano namanye ama-NCB. Ekugcineni, i-INTERPOL inesigungu esilawula kakhulu. Lo mgwamanda yi-General Assembly equkethe abamele abavela emazweni ahlukene angamalungu. I-Interpol idume ngophenyo lwayo lomhlaba wonke kanye nokuxhumana ngaphesheya kwemingcele, kanye namacala amakhulu obugebengu. Le nhlangano isebenzisa amathuluzi ahlukahlukene wamandla ophenyo.
I-INTERPOL idlala izindima ezimbalwa eziyisisekelo njengenhlangano yomhlaba wonke. Lezi zindima ngokuvamile zisebenza ukuqinisa isakhiwo sokuphepha samazwe angamalungu. Kubandakanya:
Ishintshanisa idathaI-INTERPOL ihlinzeka indlela yama-NCB ayo emazweni ahlukahlukene yokwabelana ngemininingwane. I-NCB yelizwe ngalinye lelungu ixhumana ngesiteshi esiphephile sokuxhumana namanye ama-NCB. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izenzo zabo nemisebenzi yabo ifana.
Isibonelo, uma izwe libeka i- qaphela ukuthi umuntu uyadingeka, amanye amazwe azobe ebheke lo muntu. Lokhu kungenzeka ngenxa yokushintshaniswa kwedatha.
Njengamanje, i-INTERPOL cishe ine Amarekhodi abiwe ayizigidi ezingama-90 ku-database yayo.
Ukusiza umbutho wamaphoyisa emazweni angamalungu: I-Interpol imayelana nokwakha indlela yokuthi amabutho wamazwe amaningi asizane. Lokhu kungaba endaweni yoqeqesho, i-forensics, i-database, nokuthandwa. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amaphoyisa emazweni ahlukene ayakwazi ukwenza imisebenzi yawo ngempumelelo.
Ukugcina ukuphepha komhlaba wonke: Umgomo oyinhloko we-INTERPOL ukugcina ukuphepha komhlaba wonke ngokuhlanganisa umphakathi wamazwe omhlaba. Lokhu-ke kuzoqinisa nokugcinwa komthetho emazweni omhlaba. Kubanika amandla okufeza izinhloso zabo, kufaka phakathi ukunqandwa kokushushumbiswa kwezidakamizwa, ubugebengu obenziwa nge-inthanethi, ukushushumbisa imali, ubuphekula nokunye okuthandwa nguwe.
Ngokufeza izinhloso zabo, bakha indawo ephephile yomhlaba wonke ngaphandle kwemisebenzi engekho emthethweni.
Ukuhlanganisa izinsizakusebenza: I-INTERPOL idala ithuba lokuqoqwa nokwabiwa kwezinsizakusebenza. Lezi zinsiza zisiza amazwe aziswele, ikakhulukazi izinsiza zezezimali. Izwe ngalinye lamalungu linikela ngemali ethile njengoba kubekiwe yi-General Assembly. Umphakathi nawo unganikela enhlanganweni ngokuzithandela.
Xhuma nomphakathi: I-INTERPOL isezinkundleni zokuxhumana ezinjenge-Instagram, Twitter, nokunye okuthandayo. Inhloso yalokhu ukuxhumana neningi, ukudlulisa imininingwane, nokuthola impendulo.
Ngaphezu kwalokho, lezi zingxenyekazi zenza umphakathi ukwazi ukubika noma imuphi umuntu noma iqembu okusolwa ukuthi libandakanyeka ezenzweni ezingekho emthethweni.
Isibambiso: Izinkundla zokuxhumana zibe neqhaza elikhulu ekutholeni izigebengu ezifunwayo. Ngosizo lwencwadi ebizwayo, i-INTERPOL ingavundulula izigebengu ezicashe ngemuva kokuthunyelwe nama-akhawunti ezingaziwa.
Ukubizelwa enkantolo ukugunyazwa yinkantolo yezomthetho ukuthola imininingwane, ikakhulukazi eyangasese, ngezinjongo zomthetho.
Indawo yokulandela: Izinkundla zokuxhumana sezenze ukuthi i-INTERPOL ikwazi ukulandela ngomkhondo lapho kukhona abasolwa khona. Ngokusetshenziswa kwezithombe, amavidiyo kungenzeka ukuthi abe-INTERPOL bakhombe ngqo ukuthi bakuphi abasolwa. Lokhu kube wusizo ekulandeleni ngisho nezinhlangano ezinkulu zobugebengu ngenxa yokumaka indawo.
Eminye imithombo yezokuxhumana enjenge-Instagram ngokuyinhloko isebenzisa ukumakwa kwendawo, okwenza kube lula ngabomthetho ukuthola ubufakazi bezithombe.
Umsebenzi we-Sting: Leli yigama lekhodi lomsebenzi lapho abomthetho befihla ukubamba isigebengu. Le ndlela efanayo isetshenzisiwe ezinkundleni zokuxhumana futhi ikhombisile ukuthi iyasebenza.
Abezomthetho bangasebenzisa ama-akhawunti omgunyathi ezinkundleni zokuxhumana ukuthola izigebengu ezinjengabashushumbisi bezidakamizwa nabaxhaphaza izingane.
Izaziso ezisetshenziswa yi-INTERPOL kwezokuxhumana
Enye yezindima ezibalulekile ze-INTERPOL ukwaba idatha namaphoyisa wamazwe angamalungu. Lokhu kubalulekile ukulandela umkhondo wezigebengu kunoma yiliphi izwe abazama ukufihla kulo. Enye yezindlela i-INTERPOL eyabelana ngayo ngemininingwane yokulandelela izigebengu ukuthumela izaziso ezinemibala.
Lezi zaziso zonke zidlulisa imiyalezo ehlukile.
Inethiwekhi: Lokhu kukhombisa ukuthi umsolwa othile uyisigebengu esikhulu. Itshela izwe eliyilungu lapho isigebengu sikhona ukuba sibheke isigebengu futhi sibabambe okwesikhashana. Kamuva, izwe eliyilungu lingamkhipha libuyele ezweni lakubo ngezindlela zokuxhumana.
Luhlaza: Isaziso esiluhlaza siyafana nokubomvu. Ilandela inqubo efanayo ne-Red. Umehluko phakathi kwalesi saziso nobomvu ukuthi icala okusolwa ngalo umsolwa alilibi kakhulu. Kanjalo, isaziso esiluhlaza asiphathwa ngokuphuthuma njengesaziso esibomvu.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka: Isaziso esiluhlaza okwesibhakabhaka sidlulisa umyalezo wokuthi umsolwa uyisigebengu esaziwayo. Isetshenziswa lapho kungaziwa ukuthi ukuphi umsolwa. I-INTERPOL ithumela lo mlayezo emazweni angamalungu ayo ukuze bakwazi ukuqapha umsolwa. Lapho noma yiliphi izwe eliyilungu lithola umsolwa ngaphakathi kwemingcele yabo, baxwayisa izwe lakubo kamsolwa.
Iwolintshi: I-Orange iyisexwayiso ezweni eliyilungu ngomcimbi noma umuntu ongaba yingozi ekuphepheni komphakathi. Isibonelo, i-INTERPOL ingaxwayisa amazwe angamalungu ngomuntu ongaba yiphekula. Noma ukuthi umcimbi ungahle uhlobene nobushokobezi.
Okuphuzi: Lo mbala ungumyalezo oya emazweni angamalungu ukusiza ukuthola umuntu olahlekile ovame ukuba mncane. Ingasetshenziswa futhi ukwenza abantu bakhombe abantu abangakwazi ukuzikhomba.
Mnyama: Lokhu kukhombisa ukuthi umuntu ofile ongesona isakhamuzi usezweni elithile. Ingasetshenziselwa ukwazisa abanye okungenzeka ukuthi bafuna lowo muntu.
Qasha Ummeli Womhlaba Wonke we-INTERPOL e-UAE
Kuyadingeka ukuthi ube nezindlela zokuzivikela lapho ubizwa ngesigebengu ngokungafanele. Ngaphandle kokwazi ukuthi uhlelo lwe-INTERPOL lusebenza kanjani, kuzoba nzima ukuzivikela. Ukuba yinkimbinkimbi kohlelo futhi kwenza kube nzima ngabameli bezokuvikela ubugebengu ukuthi baphathe ngendlela efanele.
Yingakho kubalulekile ukuthi uqashe ngokushesha ummeli wamazwe omhlaba wokuvikela ubugebengu.
U-Amal Khamis Umele Umeluleki Wezomthetho yinkampani yezomthetho esekwe e-UAE enolwazi ekubhekaneni nezindaba zomthetho ze-INTERPOL. Sisebenza ngokukhethekile kwizaziso ze-Interpol kanye nezexwayiso ezivela eMnyangweni Wezangaphandle wase-UAE ezinikezwa yi-Interpol kanye ne-Dubai Police. Ithimba lethu labameli bezokuvikela ubugebengu lizinikele ekuvikeleni amalungelo nenkululeko yamakhasimende ethu. Ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi nge uxhumane nathi, sizosebenza eduze nawe ukuqinisekisa ukuthi yonke inkinga ixazululiwe.